Ity dia iray amin'ireo lohahevitra tiako be dia be momba ny mpanjifako. Ny fampiharana finday dia mety ho iray amin'ireo paikady izay mitohy manana ny sarany avo indrindra sy ny tambiny ambany indrindra amin'ny fampiasam-bola rehefa vita ratsy. Saingy rehefa vita tsara dia manana fananganana an-tsokosoko sy firotsahana an-tsehatra avo lenta izy io. Fampiharana 100 eo ho eo isan'andro no ampakarina eny an-tsena, ka 35 isanjaton'izy ireo no misy akony eo amin'ny tsena.
Zoma 2 Novambra 2018 Douglas Karr
Ny votoatin'ny Enterprise Content Management (ECM) dia manohy mandroso ny tolotra omeny, tsy hoe lasa repositories antontan-taratasy fotsiny, fa tena manome faharanitan-tsaina ho an'ny fizotran'ny orinasa. GRM's Content Services Platform (CSP) dia mihoatra ny rafitra fitantanana antontan-taratasy. Vahaolana ahafahana mamorona antontan-taratasy azo zaraina ary avy eo azo hatsaraina ny làlan'ny asa aman-draharaha. Ny GRP's CSP dia mamela rafi-pitantanana atiny (CMS) hanambatra ny angona data, ny fahalalana ny milina, ny angon-drakitra manan-tsaina ary ny lozisialy DMS hitantanana antontan-taratasy, fanarahana ny kinova,